I-Mesh Belt Impingement Freezer, i-China Mesh Belt Impingement Freezer Abavelisi, ababoneleli, iFactory-Square Technology Group Co., Ltd.
Isikhenkcezisi sebhanti se-impingement esetyenziselwa ukubamba ukutya okuthe tyaba, okwenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo kwishishini lokutya kwaselwandle ukukhawulezisa ngokukhawuleza iintlanzi zentlanzi, ii-shrimp ezikhuselweyo, i-squids kunye nokunye. Ixhotyiswe nge-evaporator esebenzayo kunye nococeko kwaye isebenzisa indlela yokuhambisa ulwelo yakutshanje ngobushushu obutshintshisanayo obungama-20% ngaphezulu kuneendlela zesiko. Xa kuthelekiswa neendlela zesiko, ukunciphisa ubunzima bokutya kuncitshisiwe ngaphezulu kwe-1.5%.
● Ibhanti enemingxuma inesakhiwo setyhula sombhobho womoya kunye nolingano oluthe nkqo ukwenzela ukuphucula isiphumo sokutshintshiselana ngobushushu.
●Isithinteli sebhanti yetonela lokufaka ngaphakathi usebenzisa indawo yokugcina ebandayo yokugcina imveliso yephaneli yokuvelisa iphaneli, eqinisekisa inqanaba eliphezulu lokusebenza kwamandla kunye nokuthembeka okusemgangathweni kunye nomgangatho.
●Ifriji yetonela ixhotyiswe ngenkqubo yolawulo olusembindini okrelekrele, isixhobo sokubhaqa esizenzekelayo kunye nezibane zesilumkiso, ekulula ukuba abasebenzisi bazisebenzise kwaye bazigcine.
Ubiyelo lobude L 10M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M
Ububanzi obubiyelweyo uW 3200mm / 3500mm
Mesh ibhanti ububanzi Ububanzi beBelt 1500mm / 1800mm, ububanzi obunokusebenziseka 1400mm / 1700mm
Ukuphakama kwesitishi 30~70mm uhlengahlengiso
Amandla afakiweyo 25kw 36kw 41kw 47kw 52kw 58kw 63kw 69kw
Yangaphakathi. yabalandeli 4 6 7 8 9 10 11 12
Ingumbono wezilwanyana zaselwandle, ipheki, inyama yeziqhamo kunye nokutya okulungiselelwe.